I-China 1940-19 * 40W enkulu yezinyosi iso ehambisa ikhanda ngokusondeza nangokuzungezisa Ukwakha neFektri | Ngale
I-1940-19 * 40W iso lezinyosi elikhulu lihambisa ikhanda ngokusondeza nokujikeleza
Ikhanda elihamba phambili le-19 * 40W le-bee elinyakazayo elinokusondeza nokujikeleza kwamanje ngo-1940 ngumkhiqizo we-Beyond Second generation, uvuselelwa ngosayizi omncane, isisindo esilula, isakhiwo esizinzile Ngaphandle kwesizukulwane sokuqala se-19x40w eye eye yethulwa emakethe ngo-2016, iyimboni yokuqala eChina eklama, ithuthukise futhi ikhiqize amalambu esiteji esinyosi angama-40W & 60W. Esamanje esibonile ukuthi isisindo esincane kunazo zonke nesincane kunazo zonke esinezinyosi zamandla amakhulu emakethe yaseChina.
Imibala ecebile ye-19 enamandla RGBW LED ingadala ukukhanya okugezayo okuhle ngokushintshwa kwe-velvety abushelelezi ngenxa yohlelo lwangaphakathi lwe-16bit LED dimming. Imiphumela enamandla yevidiyo itholakala kalula ngokwenziwa kwamaphikseli ngamanye
Isitifiketi: CE. I-RoHS
I-19 * 40W iso lezinyosi elikhulu lihamba ikhanda ngokusondeza nangokujikeleza
Singabakhiqizi bokuqala eChina abaqala uku-R & D futhi bakhiqize izibani zomphumela wamehlo we-bee we-40W & 60W. Futhi la malambu ohlobo athengiswa kahle kusukela ngo-2016 ngemuva kokuthi siqale ukungena emakethe, la mehlo ezinyosi angama-19x40W asetshenziswa ku-2018 Korea Winter Olympic nakwimibukiso eminingi edumile futhi emikhulu. Uma kuqhathaniswa neso lethu lesizukulwane sokuqala esingu-19x40w (eminye imikhiqizo yamafektri isebenzisa isixazululo esifanayo salokhu), iso lezinyosi elisha olibukayo lincane kakhulu, alinasisindo esincane, lizinzile futhi lilungiswa kalula. Kulula ukusebenza ukulungisa izingwegwe nokusonga izingwegwe kubenza babe lula kakhulu ekusebenziseni, ukuletha nokufaka.
Umthombo oholelekile 19 * 40W rgbw 4in1 Led Ukulungiswa kwePan / Tilt 8/16 kancane
I-Beam angle 3 ° - 45 ° I-Pan 540 ° / 630 °
Ukusetshenziswa kwamandla 750W Nyakazisa 270 °
Izindlela Zokulawula DMX512 / Master-Slaver / Auto-Run / Umsindo / RDM Khombisa Ukubonisa umbala okungu-180 ° okungu-1.8-intshi TFT
Imodi ye-DMX 21/23/35/78/92/97 / 99CH Isokhethi yedatha ngaphakathi / ngaphandle 3-pin & 5-pin XRL isokhethi
Ukulawulwa okukodwa kwe-LED Isilinganiso Sokuvikelwa IP20
ingabonisa imicibisholo, izinombolo, izinhlamvu namaphethini Ukucaciswa
Ukusebenza kahle kohlelo lwe-optical Ubukhulu 376x280x418.5 mm; NW: 16.5 kgs
umphumela omuhle wembali kanye nokusondeza Iphakheji ejwayelekile: ibhokisi; Ikesi lendiza ngokuzithandela
Isivinini somsebenzi we-fan esishintsha ngokuzenzakalela ngokushisa kwekhanda Isitifiketi
Kufakwe izingwegwe I-CE, i-ROHS
Imininingwane Yezobuchwepheshe Bomkhiqizo
Langaphambilini U-760-7x60W ugozo lokuwasha kanye nomphumela wamehlo wezinyosi kuholele ikhanda elihambayo ekuthengisweni okushisayo
Olandelayo: 2720-IP65 ongaphandle strobe odongeni ukugeza ukukhanyisa nge-960 × 0.2W Led